Lanitra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Himmel
Ny hoe “lanitra” amin’ny teny ara-Baiboly dia manondro ny fonenan’Andriamanitra nofidin’Andriamanitra, ary koa ny anjara mandrakizay ho an’ireo zanak’Andriamanitra navotan’Andriamanitra rehetra. Ny hoe any an-danitra dia midika hoe: mitoetra ao amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy izay tsy misy fahafatesana, alahelo, fitomaniana ary fanaintainana intsony. Antsoina hoe “fifaliana mandrakizay”, “fahasambarana”, “fiadanana” ary “fahamarinan’Andriamanitra” ny lanitra. (1. Mpanjaka 8,27- enina ambin'ny folo; 5. Mosesy 26,15; Matthew 6,9; Asan'ny Apostoly 7,55-56; Jaona 14,2-3; Apokalypsy 21,3-4; 22,1- enina ambin'ny folo; 2. Petrus 3,13).
Handeha any an-danitra ve isika rehefa maty?
Misy maneso ny hevitra hoe "mankany an-danitra". Fa hoy i Paoly fa efa voatokana any an-danitra isika (Efes 2,6) - ary naleony nandao izao tontolo izao mba hiaraka amin’i Kristy any an-danitra (Filipiana 1,23). Tsy mitovy amin’izay nolazain’i Paoly teo aloha ny hoe mankany an-danitra. Mety ho tiantsika ny fomba hafa hilazana an’izany, fa tsy ny fanakianana na ny fanarabiana ny Kristianina hafa.
Rehefa miresaka momba ny lanitra ny ankamaroan'ny olona, ​​dia ampiasain'izy ireo ho anarana famonjena izany teny izany. Ohatra, misy evanjelistika kristiana sasany manontany hoe "Azo antoka ve fa ho any an-danitra ianao raha maty anio hariva?" Ny tena dikany amin'ireto raharaha ireto dia tsy hoe oviana na avy aiza izy ireo dia manontany fotsiny izy ireo raha avotra amin'ny famonjena.
Misy ny olona mihevitra ny lanitra ho toerana misy rahona sy lokanga ary arabe misy volamena. Saingy tsy zavatra any an-danitra akory ny zavatra toy izany - idiôma izy ireo izay maneho fandriampahalemana, hatsarana, voninahitra ary zavatra tsara hafa. Izy ireo dia fikasana mampiasa ny teny ara-batana voafetra mba hilazana ny zava-misy ara-panahy.
Ny fanahy dia fanahy, fa tsy ara-batana. Io ilay "toerana" itoeran'Andriamanitra. Ny mpankafy ny science science dia mety milaza fa miaina amin'ny endrika hafa Andriamanitra. Hita amin'ny toerana rehetra amin'ny lafiny rehetra izy io, fa ny "lanitra" dia faritra izay iainany. [Miala tsiny aho noho ny tsy fahatanterahako ny teniko. Ireo teolojia dia mety manana teny mazava kokoa momba ireo hevitra ireo, saingy manantena aho fa afaka mampita ny hevitra ankapobeny amin'ny teny tsotra]. Ny tiana holazaina dia ny hoe: ny "any an-danitra" dia midika hoe eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fomba maika sy manokana.
Asehon’ny Soratra Masina mazava tsara fa ho eo amin’izay misy an’Andriamanitra isika (Jaona 14,3; Filipianina 1,23). Ny fomba iray hafa ilazana ny fifandraisantsika akaiky amin’Andriamanitra amin’izao fotoana izao dia ny “hahitantsika Azy mifanatrika” (1. Korintiana 13,12; Apokalypsy 22,4; 1. Johannes 3,2). Izany dia sary mampiseho fa miaraka aminy akaiky araka izay azo atao isika. Koa raha azontsika ho fonenan’Andriamanitra ny teny hoe “lanitra”, dia tsy diso ny filazana fa ho any an-danitra ny Kristianina amin’ny andro ho avy. Hiaraka amin’Andriamanitra isika, ary ny hoe miaraka amin’Andriamanitra dia azo lazaina tsara hoe any an-danitra.
Tao amin’ny fahitana iray, i Jaona dia nahita ny fanatrehan’Andriamanitra izay tonga teto an-tany tamin’ny farany — tsy ny tany ankehitriny, fa ny “tany vaovao” (Apokalypsy 2.1,3). Tsy maninona na “ho avy” [handeha] any an-danitra isika na “tonga” amintsika izy. Na izany na tsy izany, dia ho any an-danitra mandrakizay isika, eo anatrehan’Andriamanitra, ary tena tsara tokoa izany. Ny fomba famariparitana ny fiainan’ny taona ho avy – raha mbola araka ny Baiboly ihany ny famaritana ataontsika – dia tsy manova ny finoana an’i Kristy ho Tompo sy Mpamonjy antsika.
Tsy takatry ny saintsika ny zavatra nomanin’Andriamanitra ho antsika. Na dia amin’izao fiainana izao aza, ny fitiavan’Andriamanitra dia mihoatra noho ny fahalalantsika (Efesiana 3,19). Ny fiadanan’Andriamanitra dia mihoatra noho ny saintsika (Filipiana 4,7) ary ny hafaliany dia mihoatra noho izay azontsika ambara amin’ny teny (1. Petrus 1,8). Koa mainka fa tsy hay hazavaina hoe hatraiza ny hatsaran’ny fiarahana amin’Andriamanitra mandrakizay?
Ireo mpanoratra ny Baiboly dia tsy nanome tsipiriany maro ho antsika. Saingy mahalala zavatra tokana iray isika - izany no ho traikefa nahafinaritra indrindra niainantsika. Tsara noho ny sary hoso-doko tsara tarehy indrindra, tsara noho ny lovia mahafinaritra, tsara kokoa noho ny fanatanjahantena mahafinaritra, tsara kokoa noho ny fahatsapana sy ny traikefa tsara indrindra niainantsika. Tsara lavitra noho ny zavatra rehetra eto an-tany. Ho goavana izany